Shaashad looga hortageyo falalka hanjabaadda iyo naceybka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Bogga internetka tystnainte.se oo howl-galay meey. sawir: JANERIK HENRIKSSON / TT
Shaashad looga hortageyo falalka hanjabaadda iyo naceybka
La daabacay tisdag 16 april 2019 kl 10.32
Dowladda ayaa u xilsaartay hey’adda dowliga ah ee Brottsoffermyndigheten hayadda qaabilsan dhibanayaasha inay bisha maajo ka furto internetka bog uu cnewaankiisu yahay <tystnainte.se> kaasoo qeyb ka noqon doona dadaalada dowladda ugu jirto ka hortagga hanjabaadda iyo naceybka.
Waxaa kordhay sida ay dowladdu u aragto dadka ay dhibaatadu ka soo gaarto iney si xor ah u soo bandhigaan afkaartooda kuwaasoo goobaha doodaha ee bulshada kala kulma hanjabaad iyo naceyb.
Annika Öster, agaasimaha guud ee hey’adda dhibbanaha.
– Tystnainte.se ayaa ugu horeynta loogu tala galay shakhsiyaadka ka qeyb qaata doodaha bulshada sida suxufiyiinta, siyaasiyiinta, qorayaasha iyo inta kale ee ka qeyb qaadata doodaha bulshada. Waxeynu ognahay iney iminka jirto dhibaato la xiriirta arimahaa, ayey tiri Annika Öster.
Hey’adaha iyo ururada u baahan habka ugu wanaagsan oo ey ku caawiyaan dadka dhibaatadu soo gaarto ayaa sidoo kale isticmaali kara bogga "Tystnainte.se" inkastoo cidda koowaad ee bogga loogu tala galay tahay shakhsiyaadka la kulma hanjabaadda iyo naceybka kuwaasoo u baahan aqoon iyo talo.
Annika Öster, agaasimaha guud ee hey’adda brottsoffermyndigheten ayaa sheegtay iney hey’adoodu aragtay iney jiraan dad badan oo isaga dulqaata dhibaatada hanjabaadda iyo naceybka.
– Waxa badan dadka aan ashkato la xiriirta dhibaatada loo geystay u soo gudbin boliiska iyo hey’adaha cadaaladda. Hanjabaadda iyo naceybka ayaa khatar ku ah dimuqraadiyadda iyadoo khatarta ugu weyni ka imaaneyso marka dadku ka baqaan soo gudbinta afkaartooda, ayey tiri.